मानिसको शरीरमा निस्कने कोठीले कस्तो असर गर्छ ? | ImageKhabar <!-instant articles-->
मानिसको शरीरमा निस्कने कोठीले कस्तो असर गर्छ ?
काठमाडौं, वैशाख ३१ । हाम्रो शरीरको विभिन्न भागमा रहेको कोठीको बारेमा छुट्टाछुट्टै धारणा रहेको छ भने अन्धविश्वास पनि रहँदै आएको छ ।
यदि गर्भवती महिलाले बच्चाको जन्मपूर्व केही डरलाग्दो घटना वा केही उत्तेजक घटनाको सामना गर्नुपर्‍यो भने बच्चाको शरीरमा एउटा कोठी आउने गर्छ भन्ने अन्धविश्वास रहि आएको छ । त्यही भएर कोठी कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण पनि आमा डराउने वा उत्तेजित हुने कुराले नै निर्धारण गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
जे–जस्तो अन्धविश्वास भए पनि अझै विज्ञानले पनि कोठी कसरी पैदा हुन्छ र यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने कुराको समाधान पत्ता लगाउन सकेको छैन । जन्मदैं वा जन्मेको केही समयपछि बच्चाको छालामा कोठी पैदा हुन्छ । त्यसैले कोठीलाई कहिलेकाहीं जन्मदाग पनि भनिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर पृथ्वीमा भएका हरेक मानिसको जीउमा कम्तीमा पनि एउटा कोठी हुने गरेको छ ।
औसतमा भन्ने हो भने त एउटा मान्छेको जीउमा करिव १४ वटा कोठी हुन्छन् । कोठी मानिसको शरीरको कुनै पनि भागमा आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ त मानिसको तालुमा पनि कोठी आउने गर्छ ।
विभिन्न प्रकारको कोष तथा माशंपेशीमा कोठी बन्ने हुँदा हरेक कोठी एक आपसमा फरक हुन सक्छन् । कसैकसैले शरीरमा कोठी आयो भने राम्रो मान्दैनन् । किनभने कहिलकाहीं कोठी पछि गएर क्यान्सरमा पनि परिणत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर यो एकदमै कम मानिसमा मात्रै देखा पर्छ ।
कोठीले छालालाई नराम्रो देखाइदिने हुँदा पनि धेरैले कोठी मन पराउँदैनन् । यदि कोठीको आकारमा वृद्धि भयो भने वा त्यसको रङमा परिवर्तन भयो भने पनि त्यसलाई हटाएर फाल्नु उपयुक्त हुन्छ । कहिलेकाहीँ कोठीको छाला निस्कने गर्छ, त्यसबाट रगत पनि बग्ने गर्छ । यसो भयो भने पनि क्यान्सर वा अरु कुनै रोग लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कोठीलाई हटाउनु पर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
कोठी निकाल्दा जहिले पनि चिकित्सको सल्लाह अनुसार निकाल्नु जरुरी हुन्छ । (एजेन्सी)